ခန္ဓာကိုယ် လေ့ကျင့်ခန်း ငယ်ငယ်ကတည်းကမလုပ်ဘူး ~ အိချောပို - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
ခန္ဓာကိုယ် လေ့ကျင့်ခန်း ငယ်ငယ်ကတည်းကမလုပ်ဘူး ~ အိချောပို
30 September, 2017, 01:41 PM
ကလောင် - သန္တာဖြိုး
ဒီတစ်ပတ် 8days ရဲ့ Cover Star ကတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ အတု၊ အစစ်ကိစ္စနဲ့ ပရိသတ်တွေ အငြင်း ပွားနေကြတဲ့ အိချောပိုကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ 8days Cover မှာ မဆုံတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ အိချောပိုကို မိတ်ကပ်လင်းလင်းက အလှအပ ဆုံးဖြစ်အောင် လိမ်းခြယ်ပေးထားပြီး၊ ဓာတ်ပုံဆရာ ကိုအောင်ဇော် (Love Space)က ရိုက်ကူးပေးထားပါတယ်။
Q. ပွဲခံမယ် ဇာတ်ကားကို ပြန်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ခံစားမိတဲ့ ခံစားချက်က...။
A. ကြည့်ပြီး တော့ အိချော အရမ်းကြိုးစားထားတဲ့ကားလေးပေါ့။ အဲဒီအတွက်လည်း ပရိသတ်တွေက ကြိုက်တယ် ဆိုတဲ့ အသံလေးတွေပြန်ကြားရတယ်။ အဲဒီအတွက်ကျေလည်း ကျေနပ်တယ်၊ ၀မ်းလည်း ၀မ်းသာပါ တယ်။ ပြီးတော့ ဒီကားလေး ရိုက်တုန်းက ကိုယ်တိုင်လည်း တကယ်ကို ပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်။ တချို့အခန်းတွေ ဆိုကိုယ်ကကြိုမသိဘူး။ ရိုက်ကွင်း ပေါ်ရောက်တော့မှ သိရတာပါ။ ရေထဲပြုတ်ကျမယ့် အခန်းတို့ လှည်းပေါ်တင်ပြီးလှည့်တဲ့ အခန်းတို့ဆို အဲဒီရောက်မှ သိရတာပါ။ အဲဒီ အတွက် ကိုယ့်မှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလည်း မရှိဘူး။ ဒီအတိုင်း ဒါရိုက်တာခိုင်းတာကို ရိုက်ကွင်းရောက်မှ လိုက်လုပ်ရတာပေါ့နော်။
Q. ပွဲခံမယ်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ် သက်လို့ ပရိသတ်တော်တော်များများရဲ့ မှတ်ချက်က အိချောပို မင်း သမီးဖြစ်သွားပြီလို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒီအပေါ်ကိုရော ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်မိလဲ။
A. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အားပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ အိချောကို ဒီလိုကားမျိုးလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေ လက်ခံတဲ့အတွက် နောက်ကားတွေမှာ ပိုပြီးတော့ တာဝန်ကြီး သွားတာပေါ့။
Q. ကိုယ်ရဲ့ ကားတွေ အပေါ် အကယ်ဒမီ ဇာတ်ရုပ်အတွက် ရင်ခုန်မှုရောရှိလား။
A. အိချောက ကိုယ့်ကိုလာ အပ်တဲ့ အလုပ်ကိုအမြဲတမ်း စေတနာထားပြီး တော့လုပ်တယ်။ ငါ ဒါပြန်ရမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တော့ မရှိပါဘူး။ အိချောဘက်က အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားတယ်။ အဲဒီအတွက် ပရိ သတ်တွေက အိချောပိုကားလေး ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောသံကြားရတာနဲ့ တင်ကျေနပ်ပါတယ်။
Q. Socail Network တွေမှာ ကိုယ်ရဲ့ ပုံံတွေနဲ့ Troll ကြတဲ့ အပေါ် ဘယ်လိုမြင်မိလဲ။
A. တချို့တွေဆို ကိုယ်တိုင်တောင် ပြန်ှ Share ပေးတာရှိ ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပရိသတ်က ဝေဖန်ပြောဆိုတာရော၊ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူရောရှိတာဆိုတော့ အိချောကတော့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Q. ကိုယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုရော ဘယ်လိုထိန်းဖြစ်လဲ။
A. Body နဲ့ပတ်သက်လို့ လေ့ကျင့်ခန်းတော့ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းကလည်း မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ အာခီဒိုတော့ သုံးနှစ်လောက်ဆော့ဖူးတယ်။ အဲဒီမှာ ၀ိတ်အရမ်းတက်လာလို့ ကစားတာ ပြန်ရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အစားအသောက်နဲ့ ၀ိတ်ပြန်ထိန်းလိုက်တယ်။ အိချောက တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက် အစားအသောက် လျှော့လိုက်ရင် ပြန်ကျသွားတယ်။ ကျန်တာတော့ ထွေထွေထူးထူး မကစား ဖြစ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အလုပ်မအားတဲ့အခါကျတော့ မကစားဖြစ်ရင် ပိုဝိတ်တက်မှာစိုး လို့လေ။
Q. မေမေက တောက် လျှောက်လိုက်နေတာဆိုတော့ အိချောကို မေမေက ဘယ်လောက် ထိ လွှမ်းမိုးမှုရှိလဲ။
A. မေမေကဘယ်လောက်ထိ လွှမ်းမိုးမှုရှိလဲဆိုတော့ ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက မေမေကတောက် လျှောက်လိုက်တယ်။ ကျောင်းတက်တုန်းကလည်း မေမေက တောက်လျှောက်လိုက်နေတာဆိုတော့ အိချောအတွက်က ရိုးနေပါပြီ။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
Q. အိချောရဲ့ ၀တ်စား ဆင်ယင်မှုပုံစံကရော...။
A. ၀တ်စားဆင်ယင်မှုက အိချော တော်တော်များများ လုံလုံ ခြုံခြံုဝတ်တာ များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဘက်ခေတ်အလျောက် တချို့ ကာရိုက်တာလေးတွေအရ ၀တ်ရတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့။ အိချော နည်းနည်းလေး လက်ပြတ်လေးဝတ်လိုက်ရင်တောင် ပရိသတ်တွေ အမြင်မှာ တစ်မျိုးမြင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အိချောက လူငယ် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခါတလေတော့ ၀တ်ဖြစ်မှာပါ။
Q. ပရိသတ်တွေကိုရော ဘာများပြောချင်လဲ..။
A. ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။